Ngokubanzi, siyazithenga izinto zokucoca indlu ukuba zifunxe inkunkuma, kodwa enyanisweni, izinto ezininzi azinakuncanywa, kwaye usenokungazi kakuhle. Ke namhlanje siza kuxoxa ngento engenakunyanzeliswa zizicoci zokucoca. Khumbula ukujonga ngakumbi kwaye ungenzi nantoni na eyingozi kwi-vacuu ...
Njengesixhobo sokucoca indlu - isicoci sokucoca, sidlala indima ebaluleke kakhulu, phantse lonke usapho sisixhobo esifunekayo. Isicoci sokucoca kulula kakhulu ukusisebenzisa, kodwa abantu abaninzi abakuthandi ukucoca kunye nokugcina isicoci se-vacuum. Makhe sifunde ukucoca kunye nokugcina ...
Umzi mveliso wethu uneminyaka eli-10, kwaye sihlala sizama konke okusemandleni ukubonelela ngeemveliso ezifanelekileyo kubathengi bethu, sijonga yonke into ngaphambi kokuba siyithumele, siyathemba ukuba sonke isiqwenga esandleni somthengi wethu silungile kwaye siqinisekile. ukuba iimveliso ezindala azonelanga, ukuze ...